Akhriso Baralamanka Puntland oo taageeray qorshasha Xukuumadda ay ugu jirto difaaca & sugidda amniga dhulka Puntland – Golaha 1960
Akhriso Baralamanka Puntland oo taageeray qorshasha Xukuumadda ay ugu jirto difaaca & sugidda amniga dhulka Puntland
18 Jan 2018 (Puntlandes) Baralamanka dawladda Puntland oo shalay oo ay taariikhdu ahayd 17ka jan 2018 yeeshay kulan wadatashi iyo xogwaraysi ayaa taageeray qorshasha Xukuumadda ee difaaca Puntland.
Barlamaanka ayaa ayaa soo saaray warsaxaafadeed ka kooban 4 qodob oo ay ka mid ahaayeen.
In la taageero Qorshaha Xukuumadda ay ugu jirto difaaca & sugidda amniga dhulka Puntland sida uu qabo Qodobka 7aad ee Dastuurka Puntland.
In Baarlamaanka Puntland si dhow ula socdo xaaladda difaaca dalka, waxaana loo magacaabay Guddi gaar ah.
Wxaa Muwaadiniinta Puntland ku wargelinaynaa in ka wqayb-qaadashada difaaca dalku yahay waajib daxtuuri ah, sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa qof kasta oo reer Puntland ah meelkasta oo uu joogo ka qayb qaadashada difaaca dhulka Puntland.
Waxaan ummadda Soomaaliyeed, beesha Caalamka iyo cid kasta oo danaynaysa amniga iyo nabadda Soomaaliya kuy wargelinaynaa in aaney Puntland diyaar u ahayn duulaan iyo colaad abuur, kana shaqaynayso nabadda iyo daeris wanaagga ummadda Soomaaliyeed iyo xasiloonida geeska Afrika, hase yeeshee ay waajib dastuuri ah ku tahay difaaca ilaalinta dhulkeeda iyo muwaadiniinteeda sidaa shareexada Islaamkaa iyo Qawaaniinta dawliaga ahi qabaan, sidaas darteed wixii dhibaato iyo cawaajiq xumo ka dhasha duullaan kaas uu masuuliyadeeda qaadayo maamulka Somailand.
madaxweynaha Puntland iyo wefti uu hogaaminayo oo dalka itoobiya u anbabaxay